MUUQAAL: Golaha Wasiirada Cusub ee Somalia iyo Guuxa Jira, Wariye Ayaanle Xuseen Cabdi oo si yaab leh uga hadlay - Hablaha Media Network
MUUQAAL: Golaha Wasiirada Cusub ee Somalia iyo Guuxa Jira, Wariye Ayaanle Xuseen Cabdi oo si yaab leh uga hadlay
HMN:- Annigu ma qabo in uu jiro qabiil qaranimo diidan ee waxaa jira siyaasiyiin qabiilka u adeegsada dan gaar ah. haddii aad isleedahay qabaa’ilka qanci ogoow qabiil qancayaa ma jiro.
Madaxweyne Farmaajo shacabka oo dhan baa ku taageeray waxa ayna kugu taageereen waa Soomaalinimo, haddii aad wax kale kalsoonida shacabku ku heshay adaa ii sheegidoono.
Dalkani wax ka badan 10 wasiir ma qaadi karo umana baahna marxalada lagu jiro awgeed haddii daacadnimo iyo wax wanaajin ay jirto.
Dr. Beyle iyo Mamo Maryan Qaasin 100% maqsuud baan ku ahay, waana shaqsiyaad dadku wada aaminsanyihiin oo aan qabiil lagu taageereynin, inta kale dad aan aqaano iyo kuwa aanan aqoonba wey ku jiraan laakin waqtiga aan u daayo isagaa sheegidoona! “. Ayaanle Xuseen Cabdi.